Ny tsinay, homana aty; ny tompony, mangataka atiny… | NewsMada
Ny tsinay, homana aty; ny tompony, mangataka atiny…
Ahoana ihany izy ity? Na ny fiainam-pirenena io, na fiainam-bahoaka. Tsy hita be ihany! Ny tompony, mangataka atiny. Tsy iza fa ny vahoaka: “Ny mpitondra no mitondra, ny vahoaka”, hoy i Ombalahibemaso izay. Avy amin’ny vahoaka ny fahefana izay ampindraminy ny mpitondra.
Na efa namidin’ny tompony aza ny omby na ondry, mendrika homena azy ny atiny raha mbola tratrany eo am-pandrasana na eo amim-pihinanana azy. Mari-panajana izany, ka tsy mila takina na angatahina. Izay no nahatonga ny hoe tompony mangataka atiny tany an-tendrony.
Amin’izao fotoana izao, raha ny toe-draharaham-pirenena: tsy karazan’ny tompony mangataka atiny ihany ve ny vahoaka amin’ny fampiasana ny fahefana avy aminy? Ho amin’ny fanatsarana ny fiainany sy ny fiainam-pirenena izany, araka ny fanamby tamin’ny fifidianana.
Nankaiza ny atiny? Angatahina, takina, andrasana… Eny, na efa hoe nomen’ny vahoaka ny mpitondra aza izany. Misy ny tsinay homana aty? Tsy iza indray izay fa ny olona akaiky sy ny mpiara-miasa manamaimbo tena. Mba kibo mitsara tena! Fa raha voadona ny aty, marary ny afero.
Mahabe resaka tato ho ato, ohatra, ny amin’ny faka an-keriny tany Toamasina. Iza no tena tao ambadiky ny raharaha, an’iza ireo basy, nahoana no nakarina aty Antananarivo ireo notanana am-ponja vonjimaika… ? Mbola eo am-panadihadiana izany, na aty aoriana vao hazavaina. Tsy araka ny vahoaka.
Hivoaka sy hampahafantarina ny besinimaro ny tena marina sa ho vitavita sy tsy hitahita ho azy eny? Toy ny mahazatra na nizarana azy hatramin’izay. Tsy tompony mangataka atiny fotsiny, fa tompon-trano mihono amin’izay mitranga sy atao. Na tratran’ny tian-kano tsy tian-kano, Ramatahora…
Sao izany no mahavoa na mahatonga ny mpitondra ho tsy mahavoa? Mampiaka-peo ny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena fa mila fampiharana ny tany tan-dalàna, fanjakana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fanafoana ny tsimatimanota… Misy ny tsinay homana aty; ny tompony, mangataka atiny…